FIFA investigates Burma for World Cup violence ‎
ရန်ကုန်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည့် ဘောလုံးပွဲ ပြဿနာကို ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် စုံစမ်း စစ်ဆေး
ခဲလုံး၊ ရေပုလင်းတို့၏ ရန်မှ ဝေးရာ ကွင်းအတွင်းသို့ တိမ်းရှောင်ကြစဉ် အိုမန် နည်းပြတဦး ခေါင်းတွင် ထိခိုက်သွားပုံ
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (FIFA) က ရန်ကုန်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အိုမန်-မြန်မာဘောလုံးပွဲ ပြဿနာဖြစ်ရပုံကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီဟု ဆိုသည်။
ကြာသပတေးနေ့က မြန်မာ နှင့် အိုမန်အသင်းတို့ ရန်ကုန်တွင် ယှဉ်ပြိုင် ကစားစဉ် မြန်မာပရိသတ်က ကျောက်တုံး၊ ရေပုလင်းတို့နှင့် ပစ်ပေါက်သဖြင့် ပွဲကို ရပ်လိုက်စဉ် အိုမန်အသင်းက ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် နိုင်နေသည်။
FIFA က အိုမန်အသင်း ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် နိုင်သွားကြောင်း ပွဲ ရလဒ်ကို ကြေညာထားသည်။
အိုမန်သည် ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲကို ဘုရာဇီးနိုင်ငံ ရိုင်ရိုဒီဂျနေရိုတွင် သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကွင်းပြည့်ကွင်းလျှံ အားပေးသည့် ပရိသတ်။
လုံခြုံရေးယူသည့် မီးတပ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရှေ့ဆုံးတန်းတွင် ပိတ်မိနေပုံ။
ကွင်းအတွင်း ပျံဝဲကျလာသည့် အရာဝတ္တုမျိုးစုံကို တိမ်းရှောင်နေကြသည့် ဘောလုံးသမားများ၊ သတင်းသမားများ
ခေါင်းထိသွားသူအတွက် ဆေးအဖွဲ့အကူအညီ လှမ်းတောင်းကြပုံ
ပရိသတ်ကို တောင်းပန်နေသည့် မြန်မာအသင်းခေါင်းဆောင် ခင်မောင်လွင်
ပရိသတ်ကို တောင်းပန်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်။
နောက်ပိုင်းတွင် သူလည်း ထွက်ပြေးရသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ရဲများ ရောက်ရှိလာသည်။
AP) — FIFA says it has launchedadisciplinary case against Myanmar after fans' violent behavior forceda2014 World Cup qualifier against Oman to be abandoned.
Myanmar fans threw stones and water bottles on to the field and the referee stopped the match in second-half stoppage time with Oman leading 2-0 on Thursday.
FIFA confirms Oman's 2-0 victory as the official result, to completea4-0 aggregate win.
Oman advances to the third-round group stage of Asian qualifying that is drawn Saturday in Rio de Janeiro, Brazil.